Archive du 20190627
Fetim-pirenena nihosin-dra 16 maty, 80 naratra, 4 tena ahiana ny ainy
Loza sy faty olona no niafaran’ny fety nentina nanamarihana ny faha-59 nitsingerenan’ny fahaleovantena teny Mahamasina omaly alarobia 26 jona. Vokatry ny fifanosehana teo am-bavahady hijery “Podium”,
Lanonana teny Mahamasina Sambany tsy noraisina ben’ny tanàna ny filoha
Nahariharin’ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny tsy fiarahany miasa amin’ny kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA).
Marc Ravalomanana Nirary soa ny Malagasy tsy an-kanavaka
Niarahaba ny Malagasy mpiray tanindrazana rehetra na ny eto an-toerana na ny any ivelany i Marc Ravalomanana mivady omaly noho ny fitsingerenan’ny faha-59 taona nahazoana ny fahaleovantena.
Fahitalavi-panjakana TVM Voaporofo ny tsy fahamatorana manara-penitra
Naneho fialan-tsiny ny minisiteran’ny serasera sy ny kolontsaina omaly hariva taorian’ny kiana maro samihafa mahakasika ny lesoka tamin’ny fampitana sy ny fitantarana mivantana ny fizotran’ny teny Mahamasina tamin’ny TVM,
Fampandrosoana an’Analamahitsy Cité Nitsangana ny fikambanana ADAC
Nampahafantarina tamin’ny fomba ofisialy teny amin’ny kianja Maitso eny Analamahitsy Cité ny talata 25 jona teo ny fikambanana ADAC (Association pour le Développement d’Analamahitsy Cité et ses environs), izay nitsangana ny volana mey 2019 teo.
Loza nitranga teny Mahamasina Nankahery sy nanampy ireo niharam-boina ny CUA
Tonga teny amin’ny hopitaly HJRA avy hatrany omaly hariva vantany vao nahare ny loza nateraky ny fifanosehana teny Mahamasina ka nahafatesana sy naharatrana olona ny avy ao amin’ny kaominin’Antananarivo Renivohitra (CUA).
Fisavana tetsy Mahamasina Nampijaly ny mpanao gazety
Nampitaraina mpanao gazety maro ny fihetsika nataon’ireo mpiambina niasa teo amin’ny vavahady fidirana niditra tao amin’ny kianjaben’i Mahamasina, nanaovana ny matso omaly.
Fetim-pirenena 26 jona teny Ivato Tontosa tao anatin’ny fifankatiavana sy ny firahalahiana
Tontosa tao anatin’ny fifankatiavana sy ny firahalahiana ny fankalazana ny tsingerin-taona faha-59 niverenan’ny fahaleovantena, ho an’ny kaominina Ivato.
Afomanga Karazany vaovao no nampiasaina
Nanomboka tamin’ny 6 ora hariva dia efa rakotra olona teny Anosy ny 25 jona lasa teo, niandry ny fipoahan’ny Afomanga.
Nicolas Dupuis Hanova stratejia
Hiova hafa mihitsy ny firafitry ny Barean’i Madagasikara amin’ny fihaonana amin’i Burundi anio ao anatin’ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika amin’ny baolina kitra atsy Ejipta,
Fanarahana ireo lalaon’ny Barea Ho avo 10 heny ny tolotra aterineto
Fety 2 sosona, hoy ny avy eo anivon’ny orinasam-pifandraisana Telma,
CAN Egypte 2019 Hiaka-tsehatra fanindroany anio ny Barean’i Madagasikara
Anio alakamisy 27 jona 2019 any amin’ny kianjan’i Alexandrie any Egypte manomboka amin’ny 5ora30 hariva Malagasy no hiaka-tsehatra fanindroany
Efa tena mivoatra ny ekipa rehetra miatrika ny CAN Egypte 2019, hoy i Franck Rajaonarisamba mpanazatra nasionaly Malagasy manana ny “Licence A”
Donald Trump “Hiara-kiasa amin’ny lafiny toekarena sy sosialy isika”
Nandefa taratasy fiarahabana ho an’ny filoha Andry Rajoelina sy ny vahoaka Malagasy noho ny fetim-pirenena ny filoha Amerikanina Donald Trump.
TAMIA sy fetim-pirenena Nahatsiaro an’ireo ankizy sy marefo ara-pivelomana
Toy ny fanaony isan-taona rehefa fetin’ny Asaramanitra tahaka izao dia nanatanteraka asa sosialy mahazatra azy indray ny fikambanana Tamia « TAnora MIAntsehatra » araka ny tarigetra napetrany tany am-pananganana ny fikambanana tamin’ny taona 2011,
Rocade Ivato - Tsarasaotra Olona roa naratra mafy noho ny fiara efatra nifandona
Nahazo vahana tato ho ato ny fandosiran’ny fiara nahavanon-doza. Eo am-pitadiavana ilay fiarabe fototry ny lozam-pifamoivoizana mahatsiravina ny mpitandro filaminana.
ANTOHOMADINIKA Mpanao sinto-mahery 6 tra-tehaky ny polisy
Zatovolahy 6 no hiakatra fampanoavana anio alakamisy 27 jona noho ny raharaha fanendahana nanararaotra ny hamaroan’ny olona tao anaty fety. Ny talata maraina vao mangiran-dratsy sahabo ho
Dobo-tafondro 21 Nahena ny herin’ny vanja napoaka
“Nahena ho antsasaky ny fidoboky ny tafondro ny feony sy ny heriny, omaly 26 jona teo Mahamasina”.